Wararka - Daah-furka Alaabta Cusub-Dual-channel Ultrasonic Flow Meter
Nooca Gelitaanka Dual-channel Ultrasonic flowmeter TF1100-DI
Codsiyada mitir socodka socodka-waqtiga TF1100
Daah-furka Alaabta Cusub-Dual-channel Ultrasonic Flow Meter
Sanadihii ugu dambeeyay, horumarka tignoolajiyada, mitirka socodka ayaa sidoo kale la cusboonaysiiyay.Dhammaan noocyada mitirka socodka ayaa si ballaaran loogu dabaqaa wax soo saarka warshadaha, ganacsiga iyo ilaalinta socodka biyaha iyo wixii la mid ah.Si loo daboolo baahida suuqa, Lanry Instrument waxay soo saartay badeeco cusub: mitirka socodka ultrasonic dual-channel horaantii 2022.
Dual channel mitir socodka ultrasonic waxaa ka mid ah laba nooc: TF1100-DC dual channel ultrasonic clamp-on flow meter iyo TF1100-DI dual channel gelinta mitir socodka ultrasonic.Labadoodaba leh
Ma aha oo kaliya TF1100-DC ultrasonic flowmeter-ka mid adag oo la isku halayn karo, laakiin sidoo kale waa sax.Thanks to si taxadar leh u dhigma iyo heerkulka PT1000, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sida socodka kuleylka.Iyo tignoolajiyada cusub ee horumarsan waxay bixisaa xasillooni-dhibic eber ah iyo cabbir toosan oo laba jiho ah oo ku saabsan warbaahinta dareeraha ah - sida saliidda, warshadaha kiimikada, sahayda biyaha, warshadaha biyaha wasakhda, codsiga HVAC, warshad cabitaanka iyo wixii la mid ah.
Mitirka socodka TF1100-DC/DI waxaa lagu dabaqi karaa dhexroorka tuubooyinka gudaha oo u dhexeeya 3/4 inch ilaa 240 inches (ma laha xaddidaad dhumucda gidaarka tuubada ama walxaha) iyo heerkulka warbaahinta laga bilaabo -35 °C ilaa 200°C.
Iyada oo la adeegsanayo laba kanaal oo cabbir ah, mitirka socodka TF1100-DC wuxuu sidoo kale ku habboon yahay dhibcaha cabbirka adag ee leh qaababka socodka aan ku habboonayn.
Iyada oo leh guriyaheeda heerka ilaalinta IP66 iyo daxalka u adkaysta IP67/68 aluminium ama birta aan daahin ee SUS304 dareemayaal deggan meel ka baxsan gidaarka tuubada si loogu xidho mitirka socodka.Taxanaha Lanry TF1100-DC/DI wuxuu ku habboon yahay codsi kasta oo warshadeed.
TF1100-DC Dual channel Ultrasonic Flowmeter (Ku dheji nooca)
TF1100-DI Dual channel Ultrasonic Flowmeter (nooca galitaanka)
Marka la barbar dhigo hal kanaalka mitirka socodka, faa'iidooyinka of laba kanaaladaUultrasonicFhooseeyaMeter:
1. Cabbirka socodka saxnaanta sare ee dareeraha, mitirka socodka dual kanaalka waa 0.5% (laba lammaane oo dareemayaal), mitirka socodka kanaalka kaliya waa 1% (hal lammaane oo dareeme).
2. Awoodda mitirka socodka biyaha ee Dual channel ayaa ka fiican in la qabsado xaaladaha dareeraha ee kala duwan marka loo eego hal mitir.
3. Mitirka qulqulka kanaalka laba-geesoodka ah wuxuu ku habboonaan karaa tuubada dhexroorka weyn.
4. Labada kanaal ee socodka mitirka waxaa lagu qiyaasi karaa hal waddo iyo laba jibbaaran isku mar, waxay si toos ah u kicin kartaa hab kale oo lagu cabbiro iyadoo lagu saleynayo xoogga calaamadaha marka mid ka mid ah labada kanaal uu yahay mid aan caadi ahayn ama aan lahayn calaamad.
5. Degganaanshiyo eber ah oo firfircoon oo heer sare ah.
Waqtiga boostada: Meey-18-2022